အချစ်ရေးမှာ ယုံကြည်မှုချိုးဖောက်ခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်မေးကြည့်သင့်တဲ့မေးခွန်းများ - For her Myanmar
အချစ်ရေးမှာ ယုံကြည်မှုချိုးဖောက်ခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်မေးကြည့်သင့်တဲ့မေးခွန်းများ
သူ့ကို ဆက်မယုံရဲတော့တာ သေချာပြီလား?
ကိုယ်က ယုံကြည်လို့ အချစ်တွေ ပုံအပ်ထားကာမှ မမျှော်လင့်ထားဘဲ ယုံကြည်မှုတွေ ရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတာ သွေးပျက်စရာပဲနော်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ရှော့ခ်ရတတ်တာ သဘာဝပါ။ မဆိုဆိုလည်း ကြုံလာပြီိဆိုတော့ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပေါ့… ဒီလို ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးခွန်းလေးတွေ ပြန်မေးဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ… ဘယ်လို မေးခွန်းလေးတွေလဲ ဆိုတော့…
၁။ သူ့ကို တကယ်ခွင့်လွှတ်ရဲ့လား?
တချို့မိန်းကလေးတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေချာသိတယ်ဆိုရမလား… ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ သူ့ကို ကိုယ် ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာတာမို့ ပြတ်သားစွာလမ်းခွဲကြပါတယ်။ အဲဒီလောက်မပြတ်သားရဲတဲ့ သူတွေကတော့ တွေဝေရတာပေါ့။
ဒီတော့ သူ့ကို ကိုယ်တကယ် ခွင့်လွှတ်နိုင်တာ သေချာလား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးကြည့်ပါဦး။ ဖြစ်တတ်တာက ကိုယ်က သူ့လုပ်ရပ်ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ပေမဲ့ မပြတ်နိုင်လို့ ပြန်လက်ခံလိုက်တာမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အတိတ်က အရိပ်မဲကြီးက ကိုယ့်ကိုယ်အမြဲ ခြောက်လှန့်နေမှာပါနော်။
Related Article >>> ရှေ့ဆက်လက်မတွဲသင့်သော မိန်းကလေးအမျိုးအစား (၅) မျိုး
၂။ သူကရော တကယ် နောင်တရရဲ့လား?
ပါးစပ်က ငါ မှားပါတယ်။ နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး ဆိုတာ လူတိုင်း လွယ်လွယ်ပြောတတ်ပါတယ်။ တကယ်ပဲ သူ့အမှားကို နောင်တရရဲ့လား ဆိုတာကတော့ သူ့အပြုအမူတွေက သက်သေပြမှာပါ။ တကယ်ပဲ သူနောင်တ ရနေပြီဆိုရင်တော့ လူတိုင်းမှားတတ်တာမို့ ခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာမရှိဘူးထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူက သူ့စကားကိုသူ လွယ်လွယ်ချိုးဖောက်တတ်သူဆိုရင်တော့ သေသေချာချာစဉ်းစားစေချင်ပါတယ် ယောင်းရေ။
၃။ သူ့ကို ဆက်ယုံကြည်ဦးမှာလား?
ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်ဆိုတာကတော့ အရာရာကို ထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေမှာပဲလေ။ ဒီတော့ သူ နောက်ထပ် ဒါမျိုးလုပ်ဦးမလားဆိုတဲ့ သံသယကြီးက ကိုယ့်ကို နှိပ်စက်နေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အက်ဒမင် အကြံပေးရမယ်ဆိုရင် သံသယဆိုတာ ပူလောင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတိဆိုတာ ပိုတယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် သံသယလည်း မဖြစ်သင့်သလို တအားလည်း မယုံစားပါနဲ့။ သတိလေးတော့ ကပ်ထားပါလို့။
Related Article >>> အချစ်ဟောင်းရဲ့ အကြောင်း လက်ရှိချစ်သူကို ဘယ်အထိပြောပြသင့်လဲ ?
၄။ လမ်းခွဲခြင်းက အဖြေမှန်လား ဆက်တွဲခြင်းက အဖြေမှန်လား?
ဒီအတွက် အဖြေကတော့ တစ်ယောက်ချင်းစီကို လိုက်ပြီးကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအတွက် အဖြေကို သွေးပူနေတုန်းမှာ ဆုံးဖြတ်တာထက် သွေးအေးသွားတဲ့အခါမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ အမှန်ဆုံးပါပဲ။ ခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါ.. ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် အသိဆုံးပဲ မဟုတ်လား..
၅။ သူက ဒါကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ခဲ့တာလား?
တချို့က မရည်ရွယ်ဘဲ အမှားလုပ်မိတယ်။ တချို့က အမှားကို သိသိလျက်နဲ့ စနစ်တကျ ကျူးလွန်တယ်။ မရည်ရွယ်ဘဲ ဖြစ်တဲ့အမှားတွေ၊ မရှောင်တိမ်းနိုင်လို့ မှားမိတာတွေအတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ ထိုက်တန်ပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ကွယ်ရာမှာ ဒီအမှားကို စနစ်တကျကျူးလွန်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ မထိုက်တန်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုလူရဲ့ တောင်းပန်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားက ရင်ထဲက လာတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သေသေချာချာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ယောင်းတို့ရေ…
ဘယ်သူ့ကိုမှ မျက်စိမှိတ်မယုံကြည်ဘဲ ဦးနှောက်လေးကို ပါးပါးလွှာသုံးလို့ ထိုက်သင့်သလောက် ယုံကြည်မှုထား၊ သာယာတဲ့ ဘဝနဲ့ အချစ်ရေးလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကွယ်..
သူ့ကို ဆကျမယုံရဲတော့တာ သခြောပွီလား?
ကိုယျက ယုံကွညျလို့ အခဈြတှေ ပုံအပျထားကာမှ မမြှျောလငျ့ထားဘဲ ယုံကွညျမှုတှေ ရိုကျခြိုးခံလိုကျရတာ သှေးပကျြစရာပဲနျော။ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာ ရှော့ချရတတျတာ သဘာဝပါ။ မဆိုဆိုလညျး ကွုံလာပွီဆိုတော့ ရငျဆိုငျရတော့မှာပေါ့… ဒီလို ရငျဆိုငျရတော့မယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မေးခှနျးလေးတှေ ပွနျမေးဖို့ လိုအပျလာပါပွီ… ဘယျလို မေးခှနျးလေးတှလေဲ ဆိုတော့…
၁။ သူ့ကို တကယျခှငျ့လှတျရဲ့လား?
တခြို့မိနျးကလေးတှကေတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သခြောသိတယျဆိုရမလား… ဒီအခွအေနမြေိုးမှာ သူ့ကို ကိုယျ ခှငျ့မလှတျနိုငျဘူးဆိုတာ သခြောတာမို့ ပွတျသားစှာလမျးခှဲကွပါတယျ။ အဲဒီလောကျမပွတျသားရဲတဲ့ သူတှကေတော့ တှဝေရေတာပေါ့။ဒီတော့ သူ့ကို ကိုယျတကယျ ခှငျ့လှတျနိုငျတာ သခြောလား ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မေးကွညျ့ပါဦး။ ဖွဈတတျတာက ကိုယျက သူ့လုပျရပျကို ခှငျ့မလှတျနိုငျပမေဲ့ မပွတျနိုငျလို့ ပွနျလကျခံလိုကျတာမြိုးပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အတိတျက အရိပျမဲကွီးက ကိုယျ့ကိုယျအမွဲ ခွောကျလှနျ့နမှောပါနျော။
Related Article >>> ရှဆေ့ကျလကျမတှဲသငျ့သော မိနျးကလေးအမြိုးအစား (၅) မြိုး
၂။ သူကရော တကယျ နောငျတရရဲ့လား?
ပါးစပျက ငါ မှားပါတယျ။ နောကျမလုပျတော့ပါဘူး ဆိုတာ လူတိုငျး လှယျလှယျပွောတတျပါတယျ။ တကယျပဲ သူ့အမှားကို နောငျတရရဲ့လား ဆိုတာကတော့ သူ့အပွုအမူတှကေ သကျသပွေမှာပါ။ တကယျပဲ သူနောငျတ ရနပွေီဆိုရငျတော့ လူတိုငျးမှားတတျတာမို့ ခှငျ့မလှတျနိုငျစရာမရှိဘူးထငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ သူက သူ့စကားကိုသူ လှယျလှယျခြိုးဖောကျတတျသူဆိုရငျတော့ သသေခြောခြာစဉျးစားစခေငျြပါတယျ ယောငျးရေ။
၃။ သူ့ကို ဆကျယုံကွညျဦးမှာလား?
ခဲမှနျဖူးတဲ့ စာသူငယျဆိုတာကတော့ အရာရာကို ထိတျလနျ့စိုးရိမျနမှောပဲလေ။ ဒီတော့ သူ နောကျထပျ ဒါမြိုးလုပျဦးမလားဆိုတဲ့ သံသယကွီးက ကိုယျ့ကို နှိပျစကျနတောမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။အကျဒမငျ အကွံပေးရမယျဆိုရငျ သံသယဆိုတာ ပူလောငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သတိဆိုတာ ပိုတယျလို့ မရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ သံသယလညျး မဖွဈသငျ့သလို တအားလညျး မယုံစားပါနဲ့။ သတိလေးတော့ ကပျထားပါလို့။
Related Article >>> အခဈြဟောငျးရဲ့ အကွောငျး လကျရှိခဈြသူကို ဘယျအထိပွောပွသငျ့လဲ ?
၄။ လမျးခှဲခွငျးက အဖွမှေနျလား ဆကျတှဲခွငျးက အဖွမှေနျလား?
ဒီအတှကျ အဖွကေတော့ တဈယောကျခငျြးစီကို လိုကျပွီးကှဲပွားပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအတှကျ အဖွကေို သှေးပူနတေုနျးမှာ ဆုံးဖွတျတာထကျ သှေးအေးသှားတဲ့အခါမှ ဆုံးဖွတျခကျြခတြာ အမှနျဆုံးပါပဲ။ ခေါငျးအေးအေးထားပွီး စဉျးစားကွညျ့ပါ.. ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ အသိဆုံးပဲ မဟုတျလား..
၅။ သူက ဒါကို ရညျရှယျခကျြရှိရှိလုပျခဲ့တာလား?
တခြို့က မရညျရှယျဘဲ အမှားလုပျမိတယျ။ တခြို့က အမှားကို သိသိလကျြနဲ့ စနဈတကြ ကြူးလှနျတယျ။ မရညျရှယျဘဲ ဖွဈတဲ့အမှားတှေ၊ မရှောငျတိမျးနိုငျလို့ မှားမိတာတှအေတှကျ ခှငျ့လှတျပေးဖို့ ထိုကျတနျပမေဲ့ သူကိုယျတိုငျက ကိုယျ့ကှယျရာမှာ ဒီအမှားကို စနဈတကကြူးလှနျခဲ့တာဆိုရငျတော့ ခှငျ့လှတျပေးဖို့ မထိုကျတနျတော့ပါဘူး။ ဒီလိုလူရဲ့ တောငျးပနျပါတယျ ဆိုတဲ့ စကားက ရငျထဲက လာတာမဖွဈနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ သသေခြောခြာစဉျးစားသငျ့ပါတယျယောငျးတို့ရေ…
ဘယျသူ့ကိုမှ မကျြစိမှိတျမယုံကွညျဘဲ ဦးနှောကျလေးကို ပါးပါးလှာသုံးလို့ ထိုကျသငျ့သလောကျ ယုံကွညျမှုထား၊ သာယာတဲ့ ဘဝနဲ့ အခဈြရေးလေး ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစကှေယျ..
Tags: Break up, Couple, love, Relationship, Trust
Sugar Cane February 25, 2019